Tag: b2b jiil horseed ah | Martech Zone
Tag: b2b jiil horseed ah
Sida loo Abuuri Karo B2B Badan oo leh Mawduuc
Khamiis, Juun 23, 2015 Talaado, July 21, 2015 Douglas Karr
Sarkaalka Sarkaalka Suuqgeynta (CMO) Golaha ayaa bilaabay daraasad cusub oo udub dhexaad u ah sida suuq geynta ay si wax ku ool ah ugu abuuri karto hogaamin iibin tayo leh iyada oo loo marayo qasab fikradaha hogaaminta fikirka - hawl la cadeeyay inay halgan u tahay suuqleyda maanta. Xaqiiqdii, kaliya 12% suuqleyda ayaa rumeysan inay heystaan ​​mashiinno suuq-geyn ah oo wax-qabad sare leh oo si istiraatiijiyad ah loo qorsheeyay in lagu bartilmaameedsado dhagaystayaasha saxda ah ee leh waxyaabaha ku habboon iyo qancinta. Khaladaadka ugu sareeya ee saameeya tirada soo dejinta
Manifesto Jiilka Hogaaminta B2B
Axad, Oktoobar 21, 2012 Sabtida, Oktoobar 20, 2012 Douglas Karr
Ganacsi ganacsi (B2B) jiil horseed u ah abuurista nuxurka waa istiraatiijiyad fantastik ah. Horumarinta, qaybinta iyo dhiirrigelinta waxyaabaha ku jira internetka waxay kobcin kartaa awooddaada waxayna dhisi kartaa xiriiro macaamiishaada mustaqbalka. Unbounce - bogga sameynta naftaada ee sameynta-sameynta - ayaa soo saaray muuqaalkan, B2B Hogaaminta Jiilka Manifesto si loo sharaxo geeddi-socodka guusha ee jiilka hogaaminta B2B iyada oo loo marayo suuq-geynta waxyaabaha. Infographic wuxuu bixiyaa tirakoobyada la xiriira ee taageeraya abuuritaanka nuxurka iyada oo loo marayo qorista iyo qorista buugaagta ebook, hogaaminta
Jimcaha, Sebtember 28, 2012 Douglas Karr
B2B Suuqgeynta Bulshada waxay ubaahantahay sameynta joogitaan iyo awood sii kordheysa ee warshadahaaga. Shirkadaha B2B ee qaata istiraatiijiyad dagaal si ay u dhisaan joogitaankooda khadka tooska ah ee bulshada dhexdeeda waxaa loo aqoonsan yahay inay yihiin hoggaamiyeyaal feker oo kuwa soo socdaa ay ganacsi keenaan. Marar dhif ah ayaan arkaa shirkad B2B ah oo ku qarxisa kobaca iyada oo aan lahayn istiraatiijiyad suuq geyn bulsho. Oo waxaan arkay ganacsiyo badan oo B2B ah oo si dhib yar u halgamaya maxaa yeelay mid baa ka maqnaa. Ganacsiyada fahamsan muhiimadda ay leedahay wax ku-kordhinta